किम जङ-अनः दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियाका नेताले किन मागे माफी? – AB Sansar
किम जङ-अनः दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियाका नेताले किन मागे माफी?
September 26, 2020 adminLeaveaComment on किम जङ-अनः दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियाका नेताले किन मागे माफी?
किमले आफ्ना दक्षिण कोरियाली समकक्षी मुन जे-इनलाई एउटा पत्र पठाउँदै उत्तर कोरियाको जलसीमामा छिरेका दक्षिणका एक नागरिकलाई मारिएको “लज्जाजनक घटना” हुनु हुँदैनथ्यो भनेको बताइएको छ।
सोलका अनुसार ४७ वर्षीय एक सरकारी कर्मचारीलाई उत्तर कोरियाका सैनिकहरूले फेला पारेपछि गोली हानी मारेका र उनको शव जलाइदिएका थिए।
उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
दुई देशबीचको सीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। उत्तर कोरियाले देशमा कोरोनाभाइरस प्रवेश गर्न नदिने उद्देश्यले “गोली हानेर मार्ने” नीति लागु गरेको अनुमान गरिएको छ।
किमले क्षमायाचना गर्दा के भने?
देश छोडेर ‘भाग्न खोज्ने’ दक्षिण कोरियाली कर्मचारीलाई उत्तर कोरियामा ‘मृत्युदण्ड’
‘कोरोनाभाइरसको पहिलो सम्भावित घटनापछि’ उत्तर कोरियामा सतर्कता
जुत्ता छोडेर लाईफ ज्याकेट लगाएर उनले डुङ्गा छोडेको जस्तो देखिएको दक्षिणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
किम जङ-अनले बहिनीलाई किन गरे ‘थप शक्ति’ हस्तान्तरण
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको भर्खरै पारपाचुके भएको थियो र उनी आर्थिक समस्या थिए। उनका दुई सन्तान छन्।
उनले देश छोडेर भाग्न खोजेको अनुमान गरिएको छ।
उत्तर कोरियाको गस्ती टोलीले उनलाई मङ्गलवार दिउँसो ३:३० बजेतिर आफ्नो जलसीमामा लाईफ ज्याकेट लगाएको तर थकित अवस्थामा फेला पारेको सोलको भनाइ छ।
दक्षिण कोरियामा कस्तो प्रतिक्रिया?
राष्ट्रपति मुनले उक्त घटना “स्तब्ध पार्ने” खालको भएको र सहन नसकिने बताए।
उनले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न उत्तर कोरियालाई आह्वान गरेका छन्।
“प्रतिरोध नगरेको निरस्त्र नागरिकलाई त्यसरी गोली हानेको र शव जलाएको घटनालाई उत्तरले न्यायोचित ठहर गर्न नसकेको” दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले बताएको छ।
अधिकारीहरूले विविध सुराकको विश्लेषण गरिएको बताएका छन्। तर ती सुराकहरू कसरी सङ्कलन गरियो भन्ने स्पष्ट छैन।
अन्ततः नेपाल भोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने,लकडाउनको घोषणा !
झुक्किएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका नेकपाका कार्यकर्ता फेरी नेकपामा फर्किए !
बागलुङमा सवारी कारवाहीबाट ६७ लाख राजश्व सङ्कलनl
July 18, 2021 santosh
खाना पकाउने ग्याँस र पट्रोल बढ्यो मूल्य ! यस्तो छ कारण ;